Isiphandla sezikhali sesifundazwe saseEastern Cape
Isiphandla sezikhali sesifundazwe saseEastern Cape sanikezwa ngoMashi 25, 1996. Izingalo ziqala ngesisekelo esiluhlaza kanye nesiqubulo, UKUTHUTHUKISWA KUNYE UBUNYE.
Into esemqoka yiCape Aloe, efanekisela ukubekezela namandla. Iqukethe izimbali ezintathu ezivela esiteshini esisodwa, esibonisa ubunye esifundazweni phakathi kwamaqembu ahlukene abantu abahlala khona. Ngalunye uhlangothi lwama-aloe kukhona ama-red flanks, afanekisela inhlabathi.
Ngaphansi kwe-aloe kukhona amagagasi ahlaza okwesibhakabhaka afana nogwini lwase-Eastern Cape. I-crest ilanga, elifanekisela indawo ye-congenial nesimo sezulu esitholakala e-Eastern Cape. Kubonisa isimo sengqondo esihle kanye nobungane babantu. Futhi, ukuqala kwenkathi entsha nekusasa elikhanyayo lokukhula, ukuthuthukiswa nokuchuma.
Ngaphansi kwelanga kuyinhloko yekhanda lokuphrinta ingwe, okuwuphawu lokuhlonipha, amandla kanye namagugu esifundazwe. AmaLeopards abonakala eqine, futhi kulo lonke elaseNingizimu Afrika njengophawu lwegunya. Ukusekela izingalo kukhona ama-eland amabili, ama-antelope amakhulu kakhulu futhi asakazeke kulo lonke elaseMpumalanga Kapa. E-Bushman umlando we-eland wawuhlonishwa futhi yingxenye ebalulekile yesiko labo. Inkunzi ye-eland ibonisa ubuhle.
Isibonakaliso Sezilwane - Impofu (Taurotragus oryx)
I-eland isiphequluli esisebenzisa izinhlobo ezihlukahlukene zezitshalo. Indawo yokuhlala elandelwayo ye-eland yindawo enomile ezindaweni ezihlala emadlelweni nasemahlathini. Ingakwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi isikhathi eside, njengoba ihlanganisa izidingo zayo zamanzi ezivela esithelweni esidla, ikakhulukazi ukhukhamba we-gemsbok kanye nama-tsama amakhabe.
I-eland iphinda ixhase ebusuku futhi izuza umswakama emanzini amanzi ahlala ezitshalweni njengoba izinga lokushisa lihla. I-Eland yizilwane zezilwane futhi ivikela izingane zayo ezidla izilwane ezidliwayo ngokusebenzisa i-nursery yamathole azo.
Uma besongelwa yizilwane ezifuywayo, umhlambi uyakha umgoqo onamadoda amakhulu kunaphandle namathole nabesifazane ngaphakathi. Izinkunzi ezinkulu aziyona indawo, njengoba umhlambi uhamba kabanzi ukuze uthole ukudla, kodwa ziba namandla futhi zilwa nesifazane e-oestrus. Ukubeletha sekuyizinyanga ezingu-9, futhi amathole akwazi ukugijima nemhlambi ngemuva kwamahora ngemva kokuzalwa.
Isibonakaliso Sembali - I-Cape Aloe (Aloe ferox)
I-aloe yaseCape yindabuko enhle eNingizimu Afrika. Kuyaziwa nangokuthi i-aloe ebabayo ngenxa yokusasa kwayo okubabayo. Kuvunwe njengesitshalo somuthi iminyaka engaphezu kuka-200. Umswakama uyaziwa njengenhlanzeko yemvelo yamakoloni. I-bitters ye-aloe ikhishwa emaqabungeni ayo anqunyiwe futhi asetshenziswa njenge-laxative esebenzayo.
Njengezitshalo eziningi zokwelapha, i-aloe eKapa inezinye izakhiwo ezizuzisayo. Ucwaningo lwesayensi lubonisa ukuthi i-aloe gel ingasiza ekunciphiseni ukuvuvukala nokwandisa ukuphulukiswa kwesilonda. Kubonisa nokuthi unesifo sokulwa namagciwane, antibacterial and antifungal.